Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 30, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
အစီရင်ခံစာ၏ဆက်စပ်မှုကတရာစာမကျြနှာခရီးသွားရန်သင်တို့အလိုမရှိဘဲသင်တို့ရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အစညျးအဝေးမှာကူးလူးဖလှယ်မှုကိုကူးယူကန့်သတ်ခံရဖို့ခဲ့လျှင်သင်ကြီးမားတဲ့အသံအတိုးအကျယ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။ မှတ်တမ်းများကိုဖန်ဆင်းနှင့်လက်ျာနည်းစနစ်နှင့်အတူပြုသည်ကိုအထူးသဖြင့်သည့်အခါအခါသို့သော်ဤရှောင်ကြဉ်သည်။ အဆိုပါကာလအတွင်း အလုပ်လုပ်အစည်းအဝေးများ, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးမစ်ရှင်, များစွာသောပြဿနာများကိုအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ရှည်လျားတင်ပြချက်များထားကြပါတယ်, မိုးသည်းထန်စွာစိန်ခေါ်မှုများကြီးပြင်းနေကြသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ, သငျတနျးထို့နောက်စစ်ဆင်ရေးစပွန်ဆာပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို ဒီအခြေအနေမှာ? ၎င်းကိုရေးသားရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ အထူးသဖြင့်သင်သည်အစီရင်ခံစာပါမဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုသည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်အစည်းအဝေးလေ့လာခဲ့ကြသော themes များစဉ်အတွင်းမွေးစားခဲ့ကြသမျှသောဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ဆောင်ကြဉ်းသင့်ပါတယ်။ သူကစကားစမြည်မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြသောယေဘုယျလိုင်းများကိုတင်ပြရပါမည်။ ဒါဟာအားလုံးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေခံစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အားလုံးသေချာပေါက်နာမကျန်းမှုကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားသောတစ်ချိန်တည်းမှာအစည်းအဝေးတွေအတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အစီရင်ခံစာအခြားသူများထက်သတင်းအချက်အလက်၏တူညီသောအဆင့်မှာဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း ရေးသားထားသော၏ပုံစံအတွက်တင်ပြထားပါသည်, ကမိနစ်ဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးမှုများ၏ရိုးရှင်းထုတ်ပြန်ချက်များအနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။
စာရွက်စာတမ်းများအစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့ကြသည်ဆိုပါကဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ဒီတော့သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ရှိရာက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းထည့်သွင်း, သင်သည်သင်၏ account ကို join ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးမိတ္တူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူအစီအမံယူစေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဆုံးဖြတ်ချက်များခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်သောအခါ, သူတို့ကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပင်ကအစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်သည်ခဲအချိန်ထဲကယူပါလိမ့်မယ်။ ဤအလုပ်ရပ်များသတ်မှတ်လိမ့်မည်ကတည်းကဒါဟာတကယ်အမှုအရာကို၏အကျဉ်းချုပ်များအတွက်လာမည့်အစည်းအဝေးများမှာအဆိုတော်မှစကားသံကိုပေးဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကကို Travellerအကြွင်းမဲ့အာဏာကြားနေရေးရှိသည်ဖို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆွေးနွေးရပါမည်အစည်းအဝေးကာလအတွင်းကြုံတွေ့အခက်အခဲများပြင်ပေးဖို့ထောက်ပြသည်။ လည်းသတိထားမိခဲ့ကြသမျှသောလက္ခဏာကိုတင်ပြ။
Un သက်ဆိုင်ရာအကောင့် ထိုအဖြစ်အပျက်၏ကျင်းပနိုင်ရန်အောက်ပါနာရီ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျနောကျနေ့တိုင်အောင်မပြောဘဲနေလျှင်အသင်အခြို့သောအရေးပါသောအသတင်းအချက်အလက်ချော်ပါစေလိမ့်မည်ဟုအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်အရေးအသား၏ရုတ်တရက်သင်သည်အခြေအနေတွင်အပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်များကို reset ခွင့်ပြုပါတယ်။ Brevity မာစတာကောင်းတစ်ဦးအစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း၏စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်ရပ်ရပေမည်။ ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းလှည့်ကိုရှောင်ပါ။ အထိဖြောင့်သွားပါ။
ဖတ်ရန် ကတိတည်မှုနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ယဉ်ကျေးသောဖော်မြူလာများကို ရွေးချယ်ပါ။
သွန်းလောင်း ကောင်းစွာတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရေးအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားသောကိစ္စများတင်ပြရပါမည်။ ကချောမွေ့ပြန်ဖွင့်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဦးဿုံပုံဖွဲ့စည်းခဲ့စာသားကိုလုပ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးမိတ်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နိဂုံးချုပ်၏တင်ဆက်မှုသင့်လျော်မယ့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအချက်များစစ်တမ်းကောက်ယူသောအစီရင်ခံစာ၏ကိုယ်၌ရှိသကဲ့သို့အများအပြားအပိုဒ်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလွန်အလေးအနက်ထားခံရဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုလုံးကိုအစည်းအဝေးဘမ်းမိလျှင်တစ်ခုသင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်ကိုဖြစ်စေမည်။ အများအပြားရမှတ်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်လျှင် cons အသုံးပြုပုံကိုသင်အရေးပါမှု၏အမိန့်ဆင်းအတွက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်တဲ့အကြောင်းအရာအလိုက်မြေပုံကိုရပါလိမ့်မယ်။ အစီရင်ခံစာ၏နိဂုံးမှာလေ့လာခဲ့ခံရဖို့ကျန်ကြွင်းသောအချက်များထင်ရှားဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တန်း၏တူညီသောကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့သေးရှိသည်သောတာဝန်များကိုများအတွက်တတ်၏။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရေးလိုက်, ကမေးခွန်းများကိုဆွေးနွေးကြမည်သည့်အတွက်ထိုလယ်၌အချို့သောမျှမျှတတတိကျတဲ့အသိပညာရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်သင့်လျော်သောဝေါဟာရများနှင့်အတူ, ရေတိုနှင့်ဒြပ်စာသားများဖြစ်လိမ့်မည်။
စောငျ့ရှောကျ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက် အရေးပါသည်၊ ၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်ဓမ္မဓိobjective္ဌာန်ကျပြီးသစ္စာရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အစည်းအဝေး၌ပါ ၀ င်သူများ၏မိန့်ခွန်းများအားလုံးကိုကူးရေးခြင်းကိုသင်ရှောင်ရမည်။ အဓိကအချက်များမှာပြောထားသည့်အရာ၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုသာဖော်ပြရန်သင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားရမည်။
ဒီအောင်မြင်ရန်ကသတင်းအချက်အလက်ကို select ရန်သင့်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့မျိုးအတွက်အဓိကစံချိန်တင်ထံမှသိသာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်အထူးသဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအာရုံစိုက်ရှောင်ရှားပါ။ ဒီတော့ပေါင်းစပ်၏အမှန်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ဖြစ်နှင့်အရေးပါမှု၏နိုင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ဦးစားပေး။
စာရေးသူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်းစဉ် '' တစ်နည်းအတွက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. ရှောင်ကြဉ်ပါ, ထို "ငါ" ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် "ငါတို့" ။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှကြားနေနေဖို့ရန်ရှိသည်ကတည်းက, ထို့နောက်နျဖိုးထား adjective နာမဝိသေသနသို့မဟုတ်ဖိုင်လင့်များပါသည့်မသုံးကြဘူး။ စာသားထဲမှာအထပ်ထပ် minimize လုပ်ဖို့သတိထားပါ။
အလားတူပဲ, ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းမှဝေးရွှေ့ဆိုမှတ်ချက်များကိုပိတ်ပင်ခဲ့ရပါမည်။ ဒါဟာဝေါဟာရ, သင့်သဒ္ဒါစောင့်ကြည့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နှင့် သင့်ရဲ့စာလုံးပေါင်း။ သင်အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်ပြင်သစ်စံနမူနာဖြစ်ရပါမည်။
သငျသညျစတငျမီ, ရွေးချယ်ဖို့ကြိုတင်စဉ်းစား အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းစတိုင် မင်းလုပ်တော့မယ်
ဤသူသည်သင်တို့လိုအပ်သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အစီရင်ခံစာရေးသင်ပြည့်စုံစတိုင်အဘို့အရွေးချယ်ဖို့အတှကျဒါဟာ သာ. ကောင်း၏။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြချက်များ PowerPoint နှင့်အတူလုပ်ခဲ့ကြသည်ရှိရာဤသည်စတိုင်ကိုပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သတင်းအချက်အလက်လျှော့ချမလိုအပ်ဘဲကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အစီရင်ခံစာဖြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စကားလုံး, ရှောင်ရှားရန်သင့်မှတ်တမ်း reworking စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီစတိုင်ရွေးချယ်ဖို့, သင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒုက္ခယူကြပြီရပါမည်။
ဖတ်ရန် တစ်ငြင်းဆန်ဖော်ပြအီးမေးလ် template ကို
သင်တစ်ဦးသင့်လျော်စက်ကိုဆောင်ကြဉ်းသို့မဟုတ်အခြားအခန်းတပ်ဆင်ထားသည်အခါအခွင့်အာဏာဖြင့်အသံသွင်းရှာအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျမှတ်တမ်းတင်ချင်ကြဘူးလျှင်, အများဆုံးတိုနေဖြင့်မှတ်စုယူပါ။ ထိရောက်မြန်ဆန်ခြင်းရှိကြလော့။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာပါ shared ပါလိမ့်မည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စာတမ်းများကိုသင့်ရဲ့အပိုင်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများ, သင်ရိုးရှင်းစွာစံချိန် append နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထပ်ထပ်စေရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ရုံအစီရင်ခံစာ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညွှန်ပြရန်သေချာစေပါ။
ဒါဟာတိုက်ရိုက်နှင့်လုံးဝကြားနေစတိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ကိစ္စများတွင်, တကမှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့ကပိုသင့်လျော်သည်။ ဤပုံစံတစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူများ၏ကိုယ်စားပြုအမည်, အမညျနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ရက်စွဲ, သင်တန်းသားများနှင့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းနောက်တော်သို့လိုက်သော program တစ်ခုကိုထုတ်ယူလာပါ။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်နိုင်ခြေမွမ်းမံအဖြစ်နှင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏တိုးတက်မှုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သွန်းလောင်း အစည်းအဝေး၏မိနစ်အောင်သငျသညျဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်စတင်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၏သြဒီနိတ်ထားတော်မူ၏။ အဲဒီနောကျစာရွက်စာတမ်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုကရေးသားခဲ့သည်သူတဦးတည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အစည်းအဝေး၏နေ့စွဲနှင့်ကျင်းပလျက်ရှိရာအရပ်၌ထည့်ပါ။ ထို့အပြင်ကြောင့်အမှန်တကယ်အစည်းအဝေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသူကိုလူအရေတွက်ယူပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ပျက်ကွက်နှင့်၎င်းတို့၏မရှိခြင်းတစ်ခုဆင်ခြေပေးတဲ့သူတွေကိုဖော်ပြထားခြင်း။
ဤလူအပေါင်းတို့ကို၏, ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအတွင်း၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာထွက်စေတော်မူ၏။ ထိုအခါလေ့အစီအစဉ်ကိုခေါ်သင့်ရဲ့အစည်းအဝေး၏ရည်ရွယ်ချက်, ထွက်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုချပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်သောအကြောင်းအရာများတင်ပြ။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်လာဆွေးနွေးမှုများအောက်ပါယူဆုံးဖြတ်ချက်တွေယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းလူတစ်ဦး၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသိသောအရေးပါသည်, သင်တို့၏နာမကိုလက်မှတ်ထိုးရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
La တစ်မစ်ရှင်၏အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း ပို။ ပင်တိကျတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းစစ်မစ်ရှင်များ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်များ၊ စင်းလုံးငှားစာရင်းကိုင်မစ်ရှင်များသို့မဟုတ်တရား ၀ င်မစ်ရှင်များကိုပင်အစီရင်ခံစာတစ်ခုသို့ချန်လှပ်ထားရမည်။ ဤအနှစ်ချုပ်ကိုမစ်ရှင်စပွန်ဆာထံပေးပို့ရမည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရုံသာမကသင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်သင်၏ဆန်းစစ်ခြင်းများလည်းပါရမည်
အဆင့် Editor ကို
သင်၏အစီရင်ခံစာ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျအရာရှိများနှင့်သို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာများကြောင့်များ၏အမည်များဖော်ပြရပါမည်။ ထို့အပြင်ရက်စွဲများ, ထိုမစ်ရှင်၏အရာဝတ္ထုနှင့်နောက်များ၏အမှန်တကယ်ကြာချိန်ပေါ်လာရကြမည်။ အဆိုပါအကျဉ်းချုပ်မှာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစ်ရှင်၏အထင်ရှားဆုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာပေါ်လာရကြမည်။ ဒါဟာနိဒါန်းတွင်စတင်မှီ, အကျဉ်းချုပ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နိဒါန်းမစ်ရှင်စဉ်အတွင်းဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်ကိုအပြည့်အဝကိစ္စရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်စာရင်းဖြစ်သင့်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုသင်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အေးဂျင့်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုလညျးမစ်ရှင်ကို authorize စာ၏အနှစ်သာရကိုထပ်ဖွစျရမညျ။ ဒါကမစ်ရှင်၏အတိုင်းအတာများနှင့်ဘတ်ဂျက်မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအရာဝတ္ထု, ကျွမ်းကျင်သူကော်မတီ၏အမည်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ ကျွမ်းကျင်မှု၏နည်းလမ်း, မစ်ရှင်၏ prerogative ခဲ့သောအခက်အခဲများ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်စံချိန်အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုသာသနာပြုအဖွဲ့၏အထွေထွေအစီရင်ခံစာတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်သည်သင်၏မစ်ရှင်အတွက်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချို့မှအမည်မဖော်အာမခံကြလျှင်, သင်သည် non-အမည်ခံစာရင်းအင်း form မှာကူးစက်ဘူးသောသတင်းအချက်အလက်များဖေါ်ထုတ်နိုင်။ ရေတွင်းတစ်တွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့နိဂုံးချုပ်အတူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၏ဝိညာဉ်အထိမ်းအမှတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်အစီရင်ခံစာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, အကောင့်များ, ဆောင်ရွက်မှုများအပေါင်းတို့နှင့်အထက်တစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်ကျမ်းကိုးစာရင်း append နိုင်ပါတယ်။
သွန်းလောင်း ကောင်းစွာတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရေးစာရွက်စာတမ်းသင်ဂရပ်ဖစ်, ဓါတ်ပုံများနှင့်ပင်အစီအစဉ်များကိုသုံးနိုင်သည်, စုံစုံနှင့်ဒြပ်ဖြစ်ရပါမည်။ သင့်ရဲ့ Scan ဖတ်ကအရမ်းကျယ်ပြန့်အသေးစိတ်ကိုရှိပါကနောက်ဆက်တွဲများ၌ထားတော်မူ၏။ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးအားဖြင့်ဖတ်ပါနိုင်ပါတယ်ကတည်းကလည်းနည်းပညာနှင့်သာမန်စာဖတ်သူများမှနားမလည်အသုံးအနှုန်းများကိုရှောင်ကြဉ်။ သူတို့ကိုသင်ထားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတယ်ဆိုရင်, လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုရှင်းပြပါ။
သင်၏အစီရင်ခံစာတွင်ခေါင်းစဉ်များ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်များ၊ အပြည့်အ ၀၊ သင်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပါနှင့်။ အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့်သင်၏မစ်ရှင်မှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သူများနှင့်သာသင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားပါ။ သင်၏အလုပ်၏အရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေသောအမှားများကိုရှောင်ပါ။ အမှားအယွင်းများကိုပြုပြင်ရန် Cordial သို့မဟုတ် Antidote ကဲ့သို့သောအမှားပြင်ဆင်ခြင်းဆော့ဝဲလ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်သူတစ် ဦး ဦး အားသင်၏အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလည်းအကဲဖြတ်မည့်နောက်ဆုံးစာဖတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။ သူကနားလည်နိုင်လားမမြန်ဘူးဆိုတာတောင်သူမြန်မြန်ပြောပြနိုင်တယ်။
အကောင့်နောက်ဆုံးတော့အတိုကောက်ဖြစ်သို့မဟုတ်ပင်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ အကြင်သူသည် synoptic ဖြစ်ပါတယ် Word သို့မဟုတ် Excel ကို format နဲ့စားပွဲနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ cons အဘို့, stenographic တခါတရံအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်နိုငျသောမှတ်တမ်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သက်ကရာဇျစဉျအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုစုဝေးစေတော်မူ၏။ ရေးသားနေစဉ်သင့်အကောင့်အားလုံးန်ထမ်းများအတွက်မော်ကွန်းတင်နှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ပါလိမ့်မယ်။
အစီရင်ခံစာသက်ဆိုင်ရာအကောင့်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သြဂုတ်လ 16th, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောGoogle တွင်သုတေသနမြန်ဆန်အထိ Get
သင်၏ payslip တွင်အမှားတစ်ခုအကြောင်းကြားရန် Letter template